Ukuphuca Carpet, Mat futhi ukhaphethi nge Laser umsiki - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Ukuphuca Carpet, Mat futhi ukhaphethi nge Laser umsiki
Laser Cutting Carpet, Mat futhi ukhaphethi
Eqondile ukhaphethi ahlabayo laser umsiki
Ahlabayo okhaphethi ezimbonini kanye amatshe commercial kungenye isicelo ezinkulu CO2 lasers.
Ezimweni eziningi, zokwenziwa ukhaphethi inqanyulwa nge charring esincane noma abangenaso nhlobo, futhi ukushisa eyenziwe izenzo laser bonyana batshidze imiphetho ukuvimbela fraying.
Abaningi ezikhethekile ukhaphethi ukufaka yezimoto abaqeqeshi, izindiza, nezinye izinhlelo zokusebenza ezincane sikwele-footage bazuze ngokunemba kanye lula kokuba lo precut ukhaphethi ku enkulu endaweni laser flatbed uhlelo ahlabayo.
Ukusebenzisa ifayela CAD we plan phansi, wokusika laser Ungalandela uhlaka izindonga, zikagesi eziphezu kwamakhabethe kanye cabinetry - ngisho nokwenza cutouts sethebula ukwesekwa okuthunyelwe kanye isihlalo obandayo komzila njengoba kudingeka.
Lesi sithombe sikhombisa ingxenye ukhaphethi nge cutout okuthunyelwe ukwesekwa trepanned maphakathi. Le micu ukhaphethi tho yi laser cutting inqubo, okuyinto kuvimbela fraying - inkinga evamile lapho ukhaphethi is athutha ukusika.
Lesi sithombe sibonisa onqenqemeni ehlanzekile usike esigabeni cutout. Ingxube imicu kule ukhaphethi abonise zimpawu ukuncibilika noma charring.
Carpet izinto ezifanele laser cutting:
Floor ukhaphethi, logo ukhaphethi, doormat, ukhaphethi ikhono lokuqopha elibizwa, udonga ukuze odongeni ukhaphethi, yoga mat, imoto mat, izindiza ukhaphethi, mat zasolwandle, njll
Laser umshini izincomo
CO2 laser umsiki amakhulu-format izinto
IZINDAWO UKUSEBENZA kungenziwa egcizelele
Ububanzi: 1600mm ~ 3200mm (63in ~ 126in)
Ubude: 1300mm ~ 13000mm (51in ~ 511in)
Buka Laser Cutting Machine ngoba Carpet Uyasebenza!